प्रभुको साँझको भोज परमेश्वरको आदर गर्ने उत्सव | बाइबलले सिकाउँछ
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अटेसो अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक काबाइली कालेनजिन किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंकनी (रोमन) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुजराती गुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टान्ड्रयो टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टुभिनियन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निऊ नुएर नेपाली नोंगा न्दौ न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पलाअन पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोनापियन पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बंगाली बम्बारा बाओले बास्क बिकोल बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिङ्रेलियन मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे मोटु म्यानमार म्यासडोनियन यापिज युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोतुमन रोमानियन लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुन्डा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलफ वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
ख्रीष्टको मृत्युको स्मरणार्थ उत्सव मनाउन ख्रीष्टियनहरूलाई आज्ञा दिइएको छ। यस उत्सवलाई “प्रभुको साँझको भोज” पनि भनिन्छ। (१ कोरिन्थी ११:२०) यस उत्सवको कस्तो महत्त्व छ? यो कहिले र कसरी मनाउनुपर्छ?
येशू ख्रीष्टले इस्वी संवत्‌ ३३, निस्तार चाडको रात यो उत्सव स्थापना गर्नुभयो। प्रत्येक वर्ष यहूदी महिना नीसानको १४ औं दिनमा यो चाड मनाइन्थ्यो। यस चाडको मिति निश्‍चित गर्न यहूदीहरू हरेक वर्ष वसन्त-विषुव पत्ता लगाउँथे। वसन्त-विषुव पर्ने दिनमा लगभग १२ घण्टा उज्यालो र १२ घण्टा अँध्यारो हुन्छ। वसन्त-विषुवको अघि अथवा पछि देखा पर्ने नयाँ चन्द्रमादेखि नीसान महिना सुरु हुन्छ। निस्तार चाडचाहिं नीसान महिनाको १४ औं दिनको सूर्यास्तपछि मनाइन्थ्यो।
येशूले आफ्ना चेलाहरूसित निस्तार चाड मनाएपछि यहूदा इस्करियोतलाई त्यहाँबाट पठाउनुभयो। त्यसपछि प्रभुको साँझको भोज स्थापना गर्नुभयो। त्यसबेलादेखि निस्तार चाडको सट्टा त्यो भोज मनाउन थालियो। त्यसैले वर्षको एक चोटि मात्र यो चाड मनाउनुपर्छ।
सुसमाचारको किताबका लेखक मत्तीले यस्तो लेखे: “येशूले एउटा रोटी लिनुभयो अनि प्रार्थना गरेपछि भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिंदै भन्नुभयो: ‘लेओ, खाओ। यो मेरो शरीरको प्रतीक हो।’ साथै, उहाँले कचौरा लिनुभयो अनि प्रार्थना चढाएपछि तिनीहरूलाई दिंदै भन्नुभयो: ‘तिमीहरू सबैले यसबाट पिओ; किनकि यो “करारको मेरो रगतको” प्रतीक हो, जो पापहरूको क्षमा होस् भनेर थुप्रैका लागि बगाइनेछ।’”—मत्ती २६:२६-२८.
येशूले रोटीलाई आफ्नो शरीरमा र दाखमद्यलाई आफ्नो रगतमा परिणत गर्नुभयो भनी कोही-कोही विश्वास गर्छन्‌। तर उहाँले चेलाहरूलाई रोटी दिनुहुँदा उहाँको शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको थिएन। के येशूका चेलाहरूले साँच्चै उहाँको शरीर र रगत खाएका थिए? अहँ, थिएनन्‌। किनभने त्यसरी मान्छेको मासु र रगत खानु भनेको नरभक्षी हुनु हो र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु हो। (उत्पत्ति ९:३, ४; लेवी १७:१०) लूका २२:२० मा येशूले यसो भन्नुभयो: “यो कचौरा त्यो नयाँ करारको प्रतीक हो।” के त्यो कचौरा साँच्चै “नयाँ करार” बन्यो? त्यो त असम्भव थियो किनभने करार भनेको एउटा सम्झौता हो, जुन छुन वा देख्न सकिने वस्तु होइन।
त्यसैले रोटी र दाखमद्य दुवै प्रतीक मात्र हुन्‌। रोटी ख्रीष्टको त्रुटिरहित शरीरको प्रतीक हो। निस्तार चाड मनाएर बाँकी भएको रोटी येशूले प्रयोग गर्नुभएको थियो। रोटी खमिर (रोटीलाई फुलाउने पदार्थ) नहालीकन बनाइन्थ्यो। (प्रस्थान १२: ८) पाप वा भ्रष्टतालाई बुझाउन बाइबलमा अक्सर खमिर शब्द चलाइएको छ। यसरी उक्त रोटीले येशूले चढाउनुभएको त्रुटिरहित शरीरलाई सङ्केत गर्छ, जुन पापरहित थियो।—मत्ती १६:११, १२; १ कोरिन्थी ५:६, ७; १ पत्रुस २:२२; १यूहन्ना २:१, २.
प्रभुको साँझको भोजमा प्रयोग गरिने रातो दाखमद्य येशूको रगतको प्रतीक हो। रगतले नयाँ करारलाई लागू गर्ने कानुनी आधार दियो। येशूले आफ्नो रगत “पापहरूको क्षमा होस्” भनेर बगाउनुभएको हो। त्यसैले मानिसहरू परमेश्वरको नजरमा शुद्ध हुन सक्छन्‌ र यहोवासित नयाँ करारमा बाँधिन सक्छन्‌। (हिब्रू ९:१४; १०:१६, १७) यस करारले गर्दा १,४४,००० वफादार ख्रीष्टियन स्वर्ग जान सम्भव भयो। सबै मानिसजातिले आशिष्‌ पाऊन्‌ भनेर तिनीहरूले स्वर्गमा राजा र पुजारीको रूपमा सेवा गर्नेछन्‌।—उत्पत्ति २२:१८; यर्मिया ३१:३१-३३; १ पत्रुस २:९; प्रकाश ५:९, १०; १४:१-३.
स्मरणार्थ उत्सवका ती प्रतीक क-कसले खान्छन्‌? नयाँ करारमा बाँधिएकाहरूले मात्र। तिनीहरूसित स्वर्ग जाने आशा हुन्छ। तिनीहरू स्वर्गमा राजा हुन छानिएका छन्‌ भनेर परमेश्वरको पवित्र शक्तिले तिनीहरूलाई विश्वस्त बनाउँछ। (रोमी ८:१६) येशूले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा शासन गर्ने अधिकार दिनेछु भनेर वाचा गर्नुभएको छ।—लूका २२:२९.
प्रमोदवनमा सधैंभरि बाँच्ने आशा भएकाहरूबारे चाहिं के भन्न सकिन्छ? तिनीहरू येशूको आज्ञा पालन गर्दै स्मरणार्थ उत्सवमा उपस्थित त हुन्छन्‌ तर रोटी र दाखमद्य भने खाँदैनन्‌। हरेक वर्ष अर्थात्‌ नीसान १४ को दिन सूर्यास्तपछि यहोवाका साक्षीहरू प्रभुको साँझको भोज मनाउँछन्‌। स्वर्ग जाने आशा भएकाहरू अहिले पृथ्वीमा केही हजार मात्र छन्‌। तैपनि यो उत्सव सबै ख्रीष्टियनको लागि विशेष छ। यस उत्सवमा सबैले यहोवा परमेश्वर अनि येशू ख्रीष्टले देखाउनुभएको उत्कृष्ट प्रेमबारे मनन गर्ने मौका पाउँछन्‌।—यूहन्ना ३:१६.
येशूको मृत्युको दिनको सम्झना गर्नुहोस्‌
यस महत्त्वपूर्ण समारोहमा उपस्थित हुन हामी तपाईंलाई निम्तो दिन्छौं। येशूको जीवन र मृत्युबाट हामीले कस्तो लाभ उठाउन सक्छौं, थाह पाउनुहोस्‌।
यहोवाका साक्षीहरू किन चर्चहरूभन्दा फरक तरिकामा प्रभुको साँझको भोज मनाउँछन्‌?
यहोवाका साक्षीहरू स्मरणार्थ उत्सवलाई एकदमै विशेष ठान्छन्‌। यसलाई अन्तिम रात्रि-भोज पनि भनिन्छ। यस उत्सवबारे बाइबलमा के बताइएको छ, पढ्‌नुहोस्।